Nagu saabsan - Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd.
Zouping Mingxing Kiimikada Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2002 (Shirkadeeda iibku waa Zouping Mingyuan Imp & ExpTrade Co., Ltd.). Waa shirkad xirfadlayaal ah oo soosaarayaasha caafimaadka iyo sunta cayayaanka ah, waxyaabaha lagu daro cuntada, kuwa ololka elektaroonigga ah iyo alaabada ceyriinka kiimikada ee ganaaxa. Iyadoo kororka joogtada ah iyo horumarka shirkadda, si loo ballaariyo ganacsiga dibadda loo dhoofiyo, Zouping Mingyuan Imp & ExpTrade Co., Ltd. (shirkadda iibinta dhoofinta) waxaa la aasaasay 2008. Si ay u noqoto shirkad weyn oo dhoofinta dhoofinta ah oo isku dhafan warshadaha iyo ganacsiga. Ku tiirsanaanta koox xoog leh oo R & D ah, khibrad wax soo saar hodan ah, iyo nidaamka hubinta tayada oo la aasaasay "ISO9001-2000", waxaan la sameynay xiriir iskaashi oo wanaagsan macaamiisha badan oo ku kala sugan 48 dal iyo gobol, sida Mareykanka, Japan, Koonfurta Kuuriya, Hindiya, Yurub, waxayna soo saareen boqollaal wax soo saar ah. Qaar badan oo ka mid ah badeecadahan waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Jarmalka, New Zealand, India, South Korea, Japan, Belgium, Taiwan, Koonfur-bari Aasiya iyo waddamo kale iyo gobollada. Shirkadda waxay soo martay ISO9001: shahaadada 2000 ee 2002, shahaadada ganacsiga tikniyoolajiyadda sare. 2003 iyo OHSM18000 Shahaadada nidaamka badbaadada shaqada iyo nidaamka maamulka caafimaadka 2004.
Shirkadda waxay muhiimad weyn siineysaa dhismaha kooxda tayada iyo maalgashiga cilmi baarista sayniska, waxayna kor u qaadeysaa horumarka degdegga ah ee shirkadda iyadoo la adeegsanayo hal-abuurnimo cilmiyeed iyo farsamo. Waxay si isdaba joog ah u heshay in ka badan 30 hindisaad iyo nashqad tusaalayaal koronto, waxayna leedahay xuquuq madaxbanaan oo aqooneed "tiknoolajiyad diyaarinta polymer kaabis-biyo-leh oo kuul ku leh". Guulaha ay ka gaadhay cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda waxaa ku qiimeeyay "heer caalami oo heer sare ah" oo ay soo saartay Wasaaradda warshadaha iyo teknolojiyadda macluumaadka. Shirkadda ayaa sidoo kale lagu qiimeeyay inay tahay "Shandong Province takhasus gaar ah oo cusub oo yar yar iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah", "hal shirkad hal xarun cilmi baaris iyo horumarin" iyo "ganacsiyo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah oo saynis iyo farsamo ku saleysan". Iyadoo loo hoggaansamayo fikradda ah "ilaalinta deegaanka ee muddada-dheer iyo horumarinta waara ee goobaha lagu gubo qashinka halista ah", shirkaddu waxay sii kordhisay awooddeeda horumarineed ee muddada-dheer.
Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansantaa falsafadda ganacsiga ee "macaamiisha u janjeedha, adeegga u janjeedha, hal-abuurka ugu horreeya, tiknoolajiyadda ku saleysan", waxay u hoggaansantaa ruuxa ganacsi ee "cocreation, sharing and win-win", si dhammaystiran u wanaajisa tartankeeda asaasiga ah, waxayna abuurtaa macluumaadka warshadaha leh adeegga heerka koowaad, tikniyoolajiyadda heerka koowaad iyo alaabada heerka koowaad iyada oo loo marayo hirgelinta hal-abuurnimo furan, maareyn hawlgal heer sare ah iyo karti dhisme tayo leh "Swiss Army Knife", oo leh fikrad daacad ah, ayaa gashanaysa baalasha sii kordhaya ee isticmaalaha .
Mustaqbalka rajeynaya, shirkaddu waxay qaadataa "xoojinta Mingxing, barwaaqada guud, iyo ka faa'iideysiga bulshada" himiladeeda taariikhiga ah; waxay u qaadataa "midnimo iyo ku dadaalida heer sare" sida ruuxiisa shirkadeed; waxay raacdaa tiknoolajiyada caalamiga ah ee hoggaamineysa waxayna haysaa wax soo saar aad u fiican oo hadafkeedu yahay; u hoggaansan fikradda suuqgeynta "daacadnimada ku saleysan, tayada ugu horreysa, adeegga heerka koowaad, iyo iskaashiga guuleysiga" si loo siiyo macaamiisha wax soo saar cusub oo lagu qanacsan yahay muddo dheer codsi cusub, oo si joogto ah u dedejiya xawaaraha horumarka ganacsiga, kuna dadaala si loo gaaro aragtida ganacsiga ee "noqoshada hogaamiyaha warshadaha iyo dhisida Zouping qarni"!